Sidaas aad raadineyso weeyna hab qaar ka mid ah sida loo raad raac iPhone xiriiro, haddii ay dhacdo in aad tirtirto laga yaabaa in lala xiriiro ama khasaaraha iyaga ula kac ahayn. Waa shaqo culus inay xiriir gurmad ka iPhone mar dambe ma. In this article, waxaan doonayaa inaan idin tusin 4 habab si xiriir gurmad on iPhone si fudud.
Habka 1. 1 Click to Xiriirada kaabta on iPhone la MobileTrans Habka 2. kaabta Xiriirada ka iPhone la Lugood Habka 3. kaabta iPhone Xiriirada in iCloud Habka 4. kaabta iPhone Xiriirada in Your Email
Habka 1. 1 Click to Xiriirada kaabta on iPhone la MobileTrans
Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac waa gurmad iPhone software si sahlan loo isticmaalo, kaasi oo caawinaya in gurmad iyo badbaadin xiriirada ka iPhone la click hal. Waxa kaliya ma ahan xiriirada gurmad badbaadiyey o xasuusta iPhone, laakiin sidoo kale gurmad kuwa iCloud, Gmail, Yahoo !, Hotmail oo dheeraad ah si aad u computer. Mar kasta oo aad u baahan tahay, waxaad u soo celin kartaa xiriirada aad iPhone si fudud. Waxaa intaa dheer, waxa ay ka shaqaysaa weyn oo macruufka 9.
Wondershare MobileTrans --Guji 1 iPhone kaabta Software
Xogta iPhone kaabta in computer
Tallaabada 1. Download iyo orod Wondershare MobileTrans Win ama Mac version kombiyuutarka.
Tallaabada 2. Isku aad iPhone in PC ama Mac, adigoo isticmaalaya cable USB ah.
Tallaabada 3. In uu furmo suuqa hoose, guji Back Up Your Phone inuu soo galo suuqa kala gurmad.
Tallaabada 4. Ka dib markii la aqoonsan yahay, aad iPhone la soo bandhigi doonaa bidixda. Tag dhexe ee suuqa.
By default, dhammaan xogta in la taageeray kartaa yihiin saxday. Just saarto marks ka hor xogta kale marka laga reebo Xiriirada.
Tallaabada 5. Riix Start Copy si ay u bilaabaan gurmad ah. Inta lagu guda jiro habka gurmad, aad iPhone ku xiran.
Tallaabada 6. Marka xiriirada iPhone gurmad la dhammeeyo, riix OK . Markaas, xiriirada aad la badbaadiyey on your iPhone. Waxaad soo celin karaa in aad iPhone markasta oo aad rabto.
Habka 2. kaabta Xiriirada ka iPhone la Lugood
Lugood sidoo kale aad aad u ogolaanaysaa xiriirada iPhone gurmad in computer. Waa lacag la'aan ah iyo naftaada oo aad samayn kartaa. Si kastaba ha ahaatee, aad leedahay si aad macluumaad kale oo gurmad ah halka taageero xiriirada iPhone. Si kale haddii loo dhigo, gurmad Lugood dhowaad dhammaan xogta waqti, laakiin ma aha mid aad u oggolaatid xiriirada eegista gurmad. Hoos waxaa ku qoran tilmaan buuxda oo ku saabsan sida loo raad raac iPhone xiriiro. Aynu wada socdaan iyada oo loo marayo.
Tallaabada 2. Lugood doono si deg deg ah lagu ogaadaa aad iPhone iyo markaas waxa ay muujiyaan in ay galeeysid bidix.
Tallaabada 3. Under AALADAHA , guji si aad iPhone. Marka aan sidaa yeelno, aad gacanta guddi iPhone la soo bandhigi doonaa oo Midigta.
Tallaabada 4. Riix Kooban . Hoos u furmo suuqa ilaa heli qaybta hayaan. Sax computer Tan iyo guji Back Up Hadda .
Tallaabada 5. gurmad bilaabmaya habka. Waxa aad qaadan doontaa waqti qaar ka mid ah. Just sugaan ilaa iyo hab-socodka la soo gabagabeeyo. Markaas, aad iPhone file gurmad u noqon doonaa on your computer, iyo xiriirada aad badbaadiyey ee faylka. Raadi aad gurmad iPhone goobta >>
Habka xiriirada iPhone 3. kaabta in iCloud
Haddii aad jeceshahay in gurmad xiriirada on iPhone in daruur, iCloud waa doorasho wanaagsan. iCloud aad bixisaa helaan in ay xiriirada ka internetka ee ku haboon. Hadda, raac tallaabooyinka fudud in ay bartaan sida loo sameeyo.
Tallaabada 1. aad iPhone, tuubada Settings . On Dejinta screen, hoos si aad u hesho iCloud oo ka jaftaa.
Tallaabada 2. Buuxi xisaab iCloud aad. Hubi network WiFi aad u rogmatay on.
Tallaabada 3. iCloud screen, shid Xiriirada doorasho, oo ka jaftaa darsamaan .
Tallaabada 6. Sug inta uu hannaanka gurmad la soo gabagabeeyo.
Habka 4. kaabta iPhone Xiriirada in Your Email
Marka laga reebo iCloud, Apple waxay sidoo kale ku siinaysaa awood u leh in gurmad xiriir cinwaanka email qaar ka mid ah, sida Gmail, Yahoo !, Hotmail, Exchange, iyo kuwo kale. Tutorial ayaa si xiriir iPhone gurmad in email dhow waa isku mid. Sidaas darteed, waxaan qaadan taageero xiriirada iPhone in ay is dhaafsadaan sida tusaale.
Tallaabada 1. Tag Settings aad iPhone. Raadi Mail, Xiriirada, Kalandarada .
Tallaabada 2. Click Account Add ... . Markaas, waxaad ka heli doontaa badan cinwaanka waxaa laga heli karaa email. Tubada Exchange .
Tallaabada 3. Buuxi macluumaadka ku saabsan magacaaga, email, sirta ah iyo sharaxaad.
Tallaabada 4. Tubada Next . Hubi xiriirada icon u rogmatay on. Markaas, guji Save si loo badbaadiyo xiriirada iPhone si aad u Exchange.
> Resource > iPhone > 4 Hababka si iPhone Xiriirada kaabta la / aan Lugood